လူမစွမ်းနတ်မ….Angel lifts disabled man | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » လူမစွမ်းနတ်မ….Angel lifts disabled man
လူမစွမ်းနတ်မ….Angel lifts disabled man
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Mar 10, 2012 in Opinions & Discussion | 19 comments
အခုတလော မြန်မာပြည်အနှံ့ မီးလောင်တဲ့သတင်းတွေ ဖတ်နေရတယ်။ ရပ်ကွက်ထဲလောင်လိုက် ဈေးမှာလောင်လိုက်နဲ့…. ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ မတိုင်ခင်က အတိုင်းပဲ..။ အဲတုန်းကလည် ဒီလိုပဲ ဟိုရပ်ကွက်မှာလောင်လိုက် ဟိုမြို့မှာလောင်လိုက် ဟိုဈေးမှာလောင်လိုက်နဲ့… အယူသည်းတာတော့ ဟုတ်ဘူးနော်…သို့ပေမဲ့ လူမစွမ်းနတ်မဆိုတဲ့ စကားရှိတယ်။ လူတွေ မလုပ်ရဲရင် အစောင့်နတ်တွေက လှုံ့စော်ပေးရတယ်။ ရဲဆေးတင်ပေးရတယ်ပေါ့ဗျာ.. လူလိုဆိုရင်တော့ အရက်တိုက်ပြီး မြှောက်ပေးတာပေါ့။ အပြောင်းအလဲ ကြီးကြီးမားမားတခု မကြာခင် လာဖို့ရှိနေတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရှစ်လေးလုံးတော်လှန်ရေး သမိုင်းတပတ်ပြန်လှည့်လာပြီ..။ အဲလို ဖြစ်စေဖို့ အခြေခံအကြောင်းတရားများလည်း ရှိနေတယ်။ တိုင်းပြည်ဆင်းရဲငတ်ပြတ်နေတယ်၊ ဦးသိန်းစိန်အစိုးမရမှာ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး မယ်မယ်ရရ ဖြေရှင်းချက် မရှိဘူး။ လေပဲရှိတယ်..လေထိုး လေလျော်တဲ့ခေတ် ကုန်သွားပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ လိမ်ခဲ့သလို အခု ၂၀၁၂ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း လိမ်မည့်အရိပ်အယောင်များ တွေ့နေရတယ်။ သူတို့အခုလုပ်နေတာ တသက်လုံးလုပ်လာတဲ့ အချိန်ဆွဲကစားနေတဲ့ နည်းဗျူဟာသာဖြစ်တယ်၊ တိုင်းပြည်အလှည့်အပြောင်းအတွက် ဖြေရှင်းပေးဖို့ စစ်မှန်တဲ့ မဟာဗျူဟာ မရှိဘူး..။ ရှစ်လေးလုံးတုန်းကလည်း ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယတွေကြားကနေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်၊ အခုလည်း ဖြစ်ဖို့အစပျိုးနေပြီ။ အားလုံးသတိရှိကြပါ..။
ပြီးတော့ … ပြီးတော့လေ ……………..
လုံးဝ လုံးဝ မထင်
ခင်ဗျားတို့ သူဂျီးတို့က အင်မတန်လွတ်လပ်ပြီး
ကြောင်ကြီး ငေါင်ပီး ဗြောင်ဖြီးမနေနဲ့
အခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သွားတဲ့လမ်းတလျှောက် ၈၈ ပြန်ဖြစ်နေတာပဲ…။
(သာမန်အားဖြင့်သွားရင်)…ကြားဖြတ်မှာ.. NLD က.. ခုံနေရာ ၄၀အထက် ရလိမ့်မယ်..ထင်တယ်..။
အခြေခံဥပဒေပြင်မှာတို့.. ကိုယ်လိုချင်တာကို.. ဒီမိုကရေစီကျကျ ညှိမပြောကြပဲ.. အင်အားသုံးတာတို့..ပါဝါပြတာတို့လုပ်လာကြတဲ့အခါမှာ.. တမိုင်းဘီးတပါတ်ပြန်လည်နိုင်ပါတယ်..။
ဒါတွေဖြစ်မလာအောင်.. လမ်းကြောင်းမှန်အောင်.. လုပ်ကိုင်နည်းလမ်းသိပ်မတွေ့မိဘူး..
.. မြန်မာတွေ.. ဓလေ့ ထုံးတမ်း။ အကျင့်တွေကို ပြောင်းပြန်လှန်ရလိမ့်မယ်..။
ချိုင်းနားပြည်မကလုပ်ခဲ့တဲ့.. “ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး”လို.. လှုပ်ရှားမှုကြီး လိုနေသလားတောင်မသိဘူး..။ :?
အမလေး သူတို့ကလည်း ဖြစ်စေချင်တာလားမသိ
ရှုပ်ပါတယ် အမေရိကန်ကို တိုက်လို့ အီရန်ကိုပြောရအုန်းမယ်
ဟင်္သတကိစ္စကတော့ သိပ်အဖြောင့် မတွေးစေချင်ဘူး။ အဲဒီမြို့ကို မင်းကိုနိုင်ဦးဆောင်တဲ့ ၈၈အဖွဲ့စည်းရုံးရေးသွားထားတာ မကြာသေးဘူး…။ မြို့လူထုကလည်း သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုခဲ့တယ်။ စစ်တပ်ရဲ့ တန်ပြန်သပိတ် လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေနဲ့ စပ်ဆက်ကြည့်ရင် မသင်္ကာဖွယ်ရာ အတိပဲ။ အတတ်ဟောလိုက်မယ် မဟုတ်မှလွဲရော အတိုက်အခံအဖွဲ့တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှု၊ လူထုလှုပ်ရှားမှုရေချိန်နဲ့အညီ စစ်တပ်ရဲ့ တန်ပြန်အဖျက်အမှောက်လုပ်ငန်းများ ဥပမာ- ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ သင်္ကန်းဝတ်တွေပေါ်လာတာ၊ ဗုံးခွဲမဲ့အသိပေးချက်တွေ ထွက်လာတာ၊ ချောင်းအရိုက်ခံရတာ စတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်..။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းဖို့တော့ အစောကြီးလိုသေးတယ်၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ စစ်တပ်ကို ထိန်းချုပ်ထားတာ လက်ရှိအကောင်တွေပဲလေ… လက်ရှိတပ်ချုပ်ဆိုတာ စက်ချုပ်သမလောက်တောင် စိတ်ရှိလက်ရှိ ချုပ်နိုင်တာမှဟုတ်ပဲနဲ့…
“ရှုပ်ပါတယ် အမေရိကန်ကို တိုက်လို့ အီရန်ကိုပြောရအုန်းမယ်”
ဒီရွာထဲ ခွေးဟောင်တာကမှ အရာထင် အောင်ပုပြောတာ လူ့စကားမထင်
မီးသတ်ကားဆိုတာ ဒီခေတ်ကြီးထဲ လီးလိုလို့ရနိုင်မလား
အိမ်နောက်ဖေးရေတစ်ပီပါစီစောင်ထားကြ ငါ -ီုးမသားမီး
88 လိုပြန်မဖြစ်စေချင်ကြရင် စည်းကမ်းရှိတဲ့ လူမျိုးဖြစ်အောင် နေပြကြရပါမယ်။
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ဒီမိုကေ၇စီဆိုတာ လမ်းပေါ်အော်ဟစ်နေရုံ မဟုတ်ကြောင်း ပညာပေးကြပါ။
မလတ်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီဖတ်စာလိုမျိုး စာတွေ အများနားလည်အောင် အနုပညာရှင်တွေက ရှင်းပြပေးဖို့လိုပါတယ်။(၀ါဒဖြန့်ကြီးလို မဟုတ်စေနဲ့)
သဂျီး က အမေဒစ်ကန် မှာ နေလို့ သာ တော်သေး
၂လုံးဆကာဂျီး ဖြစ်နေဘီ ။
ဘိုးခိုင် ဘိုးခိုင် နဲ့ 
်ဲိသူကြီး နဲ့ကိုကြောင်
ပြောတာ တွေ ထင် သာ မြင် သာ တဲ့သ မိုင်း ဘီး တ ပ တ် လည် လာ နိုင် စ ရာ တွေ ဆို တာ သ တိ ပြု မိ ပါ တ ယ်… ကြံ ဖွ တ် ရဲ့ ငြိမ် ချ က် သား ကေါင်း ပြီး ငွေ တွေ လိမ့်စု နေ တာ က လည်း တ ခု ခု ကို စောင့်နေ သ လို ဆို တော့တ နေ့လုပ် တ နေ့စား ကျွန် တော် တို့လို ပြည် သူ တွေ အ တွ က်္စရင်လေး နေ မီ့ပါ တယ် ဗျာ.. အ ဓိ က ရု ဏ်းကို တော သ လင်းခွေး လို။ တော ကြောင် လို စိတ် ဓါ တ် တွေ ပြည် နေ တဲ့မြန်မာ ပြည် မှာ ထပ် ဖြစ် ရင် ????????
လူမစွမ်း နတ်မ ..
ခု လူတွေ စွမ်းလွန်းလို့ နတ်က မ မ နိုင်တော့ဘူးတဲ့ …
နတ်တွေတောင် သဘာဝ အန္တရာယ် ကြောက်လို့ ရှောင်ပုန်းနေရတယ် …
ကမ္ဘာကြီးလည်း ပျက်တော့မယ် .. တဲ့
အခုလည်း ကြောင်ကြီးက အိပ်နေတုန်း ယောင်ပြီး ပြောလိုက်တာ အဟုတ်ထင်ပြီး ဘေးဘီ ကြည့်လိုက်တော့ အရာရာဟာ နဂိုအတိုင်းပါပဲလား .. ဟရို့ ….
ဦးကြောင်ကို ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ခုလို မန့်ထည့်လိုက်တယ် .. ဘာဖစ်လဲ .. လို့ ..
ဟုတ်ရော ဟုတ်ရဲ့လား ကိုကြောင်ကြီးရယ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး အခုဟာက တကယ်ဖြစ်မှာပါ